Kungani Udinga Indwangu Yokugeza?
Izivakashi zasendlini zingakukhokhela ukuvakasha okunwetshiwe. Ungagwema udwi kusuka endlini yangasese uye ekhabethe lakho lapho ulungele ingubo. Indwangu yokugeza ende ende ukukugcina umboziwe yisixazululo esifanelekile esihlotsheni esingaqondi isidingo sakho sobumfihlo. Gcina ingubo yokugeza eyengeziwe esandleni se-h ...
Wenzani umvikeli womatilasi?
Umvikeli womatilasi ufeza izinto ezine: Ugcina umatilasi uhlanzekile. Imizimba yabantu ihle kakhulu. Sonke siyajuluka ebusuku. Sonke sikhiqiza uwoyela ngezikhumba zethu. Abanye bethu bagcoba izimonyo. Sonke futhi sichitha amangqamuzana esikhumba afile. Kuneminye imisebenzi engaveza "indawo emanzi" ku-th ...
Uyini uMvikeli Womcamelo futhi Kungani Umdinga?
Uma kukhulunywa ngokulala, abaningi bagxila kumashidi nakumqamelo uqobo. Kodwa-ke, kukhona isiqeshana esibalulekile seqoqo lakho lokulala elinganweba impilo yomcamelo wakho: isivikeli somcamelo. Iziphu zokuvikela umcamelo zivaliwe, zinikela ngesithiyo ekulweni nama-allergen ajwayelekile ukuze uzwe ...